सिरहामा लागूऔषधसहित दुई जना पक्राउ
९ माघ, जनकपुरधाम । सिरहा प्रहरीले बिभिन्न लागूऔषधसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । स ७ प ५७१२ र स १० प ५५२२ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार गोलबजार नगरपालिका २ बस्ने २२ बर्षीय राकेश कुमार साह र मिर्चैया नगरपालिका ८ बस्ने...
डेरा खोज्न आएको बहानामा एक घरमा लुटपाट भएको छ । पेप्सिकोलानिवासी पवित्रा विडारी उप्रेतीको घरमा यसरी लुटपाट भएको हो । सनसिटी अपार्टमेन्टसँगै रहेको हिमालय टोलमा डेरा खोज्न आएका ती युवाले पवित्रालाई घरभित्रै बन्धक बनाएर सुनको सिक्री लुटेका थिए ।...
डडेल्धुरा : खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय डडेल्धुराले ५ जना व्यापारीविरुद्ध डडेल्धुरा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्यमा असर पार्ने खाद्यपदार्थ बिक्री गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो। खाद्य कार्यालयले खाद्य ऐन, २०२३ अनुसार अनुसन्धान...
९ माघ, जनकपुरधाम । धनुषामा एक जना वडा अध्यक्षको निधन भएको छ । सीमावर्ती स्थानीय तह जनकनन्दनी गाउँपालिका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष भोगी पाठकको उपचारको क्रममा भारतमा निधन भएको हो । ५५ वर्षीय पाठक अकस्मात बिरामी भएपछि बिहीबार उपचारका...
सानिमा म्युचुअल फण्डको आईपीओ खुल्दै, कस्तो देखिएला लगानीकर्ताको आकर्षण ?
काठमाडौं । सानिमा क्यापिटलको दोस्रो क्लोज इन्डेड म्युचुअल फण्ड आजदेखि खुला हुँदैछ । ७ वर्ष अवधि रहेको ‘सानिमा लार्ज क्याप फण्ड’ को बिक्री शुक्रबारदेखि खुला गर्न लागेको कोष व्यवस्थापक सानिमा क्यापिटलले जनाएको छ । यो म्युचुअल फण्डले १ अर्ब रुपैयाँ...
९ माघ, काठमाडौं । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आफू बसोबास गरिरहेको वा आवाद गरेको जग्गा प्राप्तिका लागि ३५ दिनभित्र स्थानीय तहमा निवेदन बुझाउन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले आग्रह गरेको छ । आयोगले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै...
जो बाइडेनले उल्ट्याए ट्रम्पको निर्णय
अमेरिकी नवनियुक्त राष्ट्रपति जो बाइडेनले निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णय उल्ट्याएको खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ । बाइडेनले कुल १५ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जसमा आप्रवासीलाई राहत दिने, कयौं मुस्लिम देशमाथि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध हटाउनेलगायतका छन् । साथै...
अघिल्लो दिनको तुलनामा करिब ३२ अंक बढेपछि बिहीबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक २ हजार ३ सय ७४.६४ विन्दुमा उक्लेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से १.३६ प्रतिशतले बढेको हो । सो दिन कारोबारमा आएकामध्ये बैंकिङ र सामूहिक लगानी कोष...
भारतीय राजधानी नयाँदिल्लीमा एउटा रोडको नाम दिवंगत अभिनेता सुशान्तसिंह राजपुतको नामबाट राखिने भएको छ। दक्षिणी दिल्लीको एन्ड्रुगन्जदेखि इन्दिरा क्याम्पसम्मको रोडको नाम सुशान्तसिंह राजपुत मार्ग राख्ने निर्णय स्थानीय परिषदले गरेको छ। उक्त रोडमा धेरैजसो मानिसहरू बिहारबाट बसाइँ सरेर आएका र उनीहरूले सुशान्तको सम्झनामा सडकको...
जेनेभामा उठ्यो नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा, कुन देशका प्रतिनिधिले के भने ?
९ माघ, काठमाडौं । नेपालको मानव अधिकारको पछिल्लो अवस्थाबारे जेनेभामा छलफल भएको छ । बिहीबार भएको तेस्रो आवधिक समीक्षामा विभिन्न मुलुकहरुले नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायमा भएको ढिलाइ, प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित पार्ने गरी ल्याइएको विधेयक र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तताको विषयलाई...
४३ मिनेट अघि लोकान्तर